HomeTurkeyMpaghara Marmara54 SakaryaSapanca Teleferic project No EIA Report Claim
12 / 11 / 2019 54 Sakarya, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, TELPHER
sapanca USB car project project ced na-ekwughi okwu ọ bụla
Ekwuputala na enweghị EIA Report nke Teleferic Project na Sapanca nke na-arụ ụka maka ihe dị ka ọnwa 3, nakwa na ọ bụ mpụ inye ikikere iwu ihe owuwu.
Onye nnọchi anya mpaghara TMMOB Sakarya Salim Aydin, na nnọkọ akụkọ, Teleferik Project, ọtụtụ ajụjụ enweghị ike ịza, ọrụ 'm mere bụ' indinde 'sketch' kwuru na ọrụ ahụ.
Aydın, Kırkpınar na Mahmudiye, ọkachasị nke Sapanca green ka a na-emeso iro ma gbanwee ka ọ bụrụ ihe maka ịgbazinye ụlọ, "Telepric Project" na-etinye ọnụ ọzọ na ebe obibi anyị. Ebumnuche anyị ịhapụ ala anyị ketara n’aka ndị nna nna anyị na agụụ maka Kırkpınar na Mahmudiye mara mma, bụ ihe si n’obodo Sapanca na Bursa Teleferik A.Ş. na-agba mbọ imebi etu agbụrụ si gboo ”.
Aydın kwuru, sị: “Anyị, Kırkınarlı na Mahmudiyeliler, Sapancalılar ndị na-echebe ebe obibi anyị, ọdịdị anyị na ihe nketa anyị mere eme, na-agbakọ ọnụ n'ihu ọha na ndị Sapanca taa megide ọtụtụ ihe isi ike na ihe isi ike ka ha na-alụ ọgụ megide ikpe na-ezighị ezi a, talana na mgbazinye. Ndị Sapanca, ndị ógbè anyị, Sakarya na obodo anyị n'ozuzu ya maara usoro a. Ọ na-aga n'ihu na ebumnuche iwu na nke iwu dịịrị nke anyị na-arụ ọrụ megide ụgwọ ụlọ, na usoro nke nghọta anyị maka ichebe ọdịdị anyị. Anyị ga-agwa Sakarya, ndị nta akụkọ na ọha na eze na akụkọ teknụzụ a kwadebere n'oge a. "
Salim Aydın mechara, ụlọ nke injinia gburugburu ebe obibi Kocaeli Alaka Ex. Trans. Eng. / O keritere akụkọ sitere n'aka onye ọrụ oceanographer Sait Ağdacı.
AKW REKWỌ EIA
Nkwupụta ahụ gụnyere echiche ndị a:
1-Ihe oru ngo a siri gosiputa adighi nkọwa ya ma o dighi aza otutu ajuju. Na nkenke, oru a bu “sket” ma ngwu a ghe oghe oldu m mere ya “.
2-Banyere ụzọ a ga-esi wuo, mkpesa EIA (Sakarya Provincial Directorate of Environment and Urbanization na Sakarya Metropolitan Municipality) enweghị ike iru n'ụzọ ọ bụla ma achọtaghị ihe ndekọ banyere ụdị akụkọ a. Na nkenke, ọrụ ahụ enweghị akụkọ EIA (nke oma / adịghị mma). N'agbanyeghi nke a, ịnye ikike iwu ụlọ na ịmalite iwu bụ mpụ n'okpuru iwu.
3-Enyere ala ahụ dị ka ebe a na-ejikwa okporo ụzọ na-adọba ụgbọala na ebe a na-adọba ụgbọala maka ọnọdụ na ejiri ya dịka “ebe ala ọma jijiji na mpaghara ebe a na-ere ahịa”. N'okwu a, iji mpaghara maka ebumnuche ndị a bụkwa mpụ tupu iwu.
Ọnụ ọgụgụ osisi ị ga-egbutu
4-Na agba mbụ, na mpaghara ebe a ga-agbakọ eriri eriri USB nke X dị ka 1500m, ihe dị ka 5000 larch, scotch painin, beech, chestnut na hornbeam ụdị ga-ebipụ. Ilele oru dum; Ulo a (nke a na-eche na ọ ga-eme ya), ebe ndị njem (ogige tii, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ebe egwuregwu, ebe a na-adọba ụgbọala, wdg), ebe a na-enye iwu na mgbukpọ a nwere ike ruo 20.000 a ga-emebi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ kpamkpam. Otu ihe a mere n'oge afọ 2005-2017 nke ala ọhịa site na iwere na 2B na zoning.
5-Mpaghara Sapanca, ọkachasị mpaghara Marmara, Bolu na Ankara n'ihi ịdị nso nke ụmụ amaala anyị ebe a na ọkachasị na afọ ndị na-adịbeghị anya bụ ebe oku maka ndị mba ọzọ. N'ihi njirimara a, ọ bụ ihe nwute, ọ dọtara uche ụfọdụ ngalaba ebe a na-akwụ ụgwọ ya, ekpughere ya n'osisi / ncha osisi ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
Sapanca na-a waterụ mmiri nke ya
6-Ndi ụlọ mmiri na nke si mba ofesi mechiri osimiri Sapanca mechiri ndị obodo Sapanca wee jiri ego drinkụọ mmiri nke ha.
7-Ebe a na-eme atụmatụ maka ụzọ ụdọ ahụ, ọ bụkwa mpaghara ebe mmiri mmiri dị n'okpuruala bara ụba ". Nke a ga - eme ka nsogbu mmiri Sapanca dị, nke na --aga ọsọ ọsọ na ụkọ mmiri.
8-Ọdọ mmiri Sapanca bụ naanị ebe mmiri dị n'okirikiri mmiri nke Sapanca na oke ọhịa nke ụdị ọrụ a na mbibi nke iwu mmiri na-enweghị atụ, mmiri mkpofu nke ebe obibi etolite na ọdọ ahụ aghọọla ọdọ mmiri Mesotrophic.
N'aka ozo, eutrophication ebidola na Ọdọ Mmiri Sapanca, ọdịnaya oxygen na ọdọ mmiri ebelatala, ụdị na njupụta nke ọdọ ahụ apụwo n'anya. Ya mere, mgbe 10-15 bụ anụ azu 48 na Sapanca Lake ruo n'afọ bu ụzọ, 4-5 ebelatala ruo taa. N'ugwu Sapanca, ụdị anụ ọhịa 19 apụwo n'anya ka oge na-aga, a hụkwara 5 ikpeazụ ka afọ gara aga.
9- Ọ bụ ihe nwute na ejiri ọrụ a tinye aka na steeti Sapanca bụ isi mmalite mmiri dị na Sakarya na Sapanca.
10- Ọ bụ ezie na enwere nghọta banyere ibi ala ọma jijiji na mpaghara anyị; Na Sapanca, nke bụ otu n'ime ebe echekwara nke ọma na ala ọma jijiji 1999, ọnwụ nke mpaghara a na-enweghị ịmepụta mpaghara ala ọma jijiji ọzọ bụ ọdachi.
11-Na mgbakwunye, ụdị ọrụ a ga-arụ na-enweghị nkwenye na nnabata nke ndị Sapanca ga-akwadebe ala maka esemokwu mmekọrịta mmadụ na ihe omume.
12-N'iburu n'uche ebumnuche ndị a edepụtara n'elu, ekwesịrị ịkwụsị ọrụ owuwu ngwa ngwa ozugbo ma rụkwaa mpaghara ahụ.
Nwepu nke Mbughari Ugbo ala nke Undulu nke Ulo oru
Clock Tower-Seyrangahtepe USB Car Project'n
Emezuru Atụmatụ Mmezu Kartepe Ropeway
Uzungöl-Karester Hill USB Car Project'n
Enweghi ngosi na oru Kabatas Seagull
Antalya 3. Kwụsị Kwụsị n'abalị na Usoro Nlekọta Ụgbọ okporo ígwè
Akara aha maka kagbuo Sapanca Cable Car Project…
Tanzania Darussalam - Ọdụ Morogbọ okporo ígwè Morogoro…
Ịmalite ọrụ nchịkwa nke Nostalgic na Şarköy District